Ntsay Christian: Miantso fitiavan-tanindrazana
mardi, 11 février 2020 21:55
Tonga nanome voninahitra ny lanonana nahatsiarovana ny namonoana ny Kolonely Ratsimandrava Richard, Filoham-panjakana tamin’izany fotoana izany, ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian, androany 11 febroary teny Ambohijatovo, sy nahatsiarovana ihany koa an’ireo olo-malazan’ny Foloalindahy sy mpitandro ny filaminana lavo teo am-perinasa.
Nambaran’ny Praiminisitra fa zava-dehibe ny fahafahan’ny firenena mahatsiaro ireo Olomangany, ary maro ny lesona azo tsoahina amin’izao fanamarihana izao. Ny fitondram-panjakana dia mametraka mazava tsara fa tsy misy fanarenana, tsy misy fahombiazana amin’ny hoavy raha tsy mahay mahatsiaro ny fitiavan-tanindrazana izay nasehon’ireo zoky ray aman-dreny teo aloha isika.
Nomarihiny fa amin’izao fotoana izao dia hita taratra fa efa manomboka miverina ny fifampitokisana eo amin’ny mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka, ary efa manomboka miverina tsikelikely izany fandriampahalemana izany.
Manoloana izany dia nohazavainy fa miandrandra fanovana ho amin’ny tsaratsara kokoa isika amin’izao fotoana izao, ary tokony handray lesona amin’ny nanoloran’ireo Olomanga ny ainy ho an’ny tanindrazana isika izay mahatsapa fa manana andraikitra amin’ity firenena ity.